Kubvunzurudzwa: mutambo wevhidhiyo wekubvunzurudza magandanga ... | Linux Vakapindwa muropa
Kubvunzurudzwa ndeye yakasarudzika mutikitivha vhidhiyo mutambo kwauchazofanira kuita kubvunzurudza kubvisa sangano remagandanga. Ichokwadi ndechekuti vanogadzira mitambo yemavhidhiyo vanofanirwa kutsvaga mafirata matsva, nyaya uye madingindira ekugadzira chaiwo emitambo yemavhidhiyo muindasitiri yanga ichiitika kwemakore uye panenge paine zvishoma zvekushandisa. Asi dzimwe nguva vanowana mamwe maburi asiri akajairika, kunyangwe hazvo angave anokakavara ...
Tsigiro iri kuuya kuLinux gore rino, kwaunogona kutora pasi zvisinganzwisisike gandanga rakanzi The Liberation Front. Iwe uchave mutikitivha uyo anozofanira kubata nehunhu, hunhu, radicalization, psychology, uye mvumo yaunogona kushandisa pane vaunobvunzurudzwa. Dhipatimendi remapurisa rinokupa iwe nebasa iri kuti uwane zvakavanzika zvemagandanga nehurongwa hwakaomarara hwekufananidza kwekutaurirana.
Critique Gaming ndiye anovandudza yemutambo uyu, uye yevamwe vakaita se "Iyi Hondo Yangu", "Mapepa, Ndokumbirawo", "Ndiwo Mapurisa", "Orwell", ... Uye mune iri basa nyowani vakaisa kuyedza kukuru mune zvese hunyanzvi hwekuita kuti kutaurirana kuve kwese uye kutevedzera hurukuro chaiyo:
Mumwe nomumwe kubvunzurudza kunozonyanya kuoma kupfuura yapfuura, uye unogona kuisvitsa zviuru nezvenzira dzakasiyana.
Vanhu zvepfungwa zvinoitika uye yakaoma.
La nhoroondo inosvitsa madingindira enguva ino sekushomeka kwezvematongerwo enyika, kushandisa zvisizvo simba, hutano hwepfungwa, nezvimwe.
Izvo zvine 3 magumo akasiyana izvo zvinozoona ramangwana renyika. Iwe sarudza izvo ...
Mutambo wakaomarara manejimendi uye zano
Runako hwakanaka hunyanzvi uye mumhanzi unoshongedza zvese zviri pamusoro
Zvichida mamwe mapoinzi anoita kunge ane gakava uye kunyange asina hunhu kana asina hunhu (zvinoita senge kwandiri), asi chokwadi ndechekuti inogona kunge ichinyatso kubudirira. Muchokwadi, isu tinorarama munyika umo mune zviuru zvemafirimu eHollywood uko vanhu vanouraya, kubata chibharo nekutambudza kazhinji, mitambo yemavhidhiyo yakatakurwa nezvechisimba uye chisimba, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Kubvunzurudzwa: mutambo wevhidhiyo wekubvunzurudza magandanga ...